स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझायो ३० करोड - Aathikbazarnews.com स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई बुझायो ३० करोड -
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकम प्रालिले रू. ३० करोड बक्यौता बुझाएको छ । रकम बुझाएसँगै स्मार्ट टेलिकम खारेजीबाट जोगिएको छ । स्मार्टले बाँकी बक्यौता बापतको आफूले कबोल गरेअनुसारको रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरेको हो । असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई स्मार्टले फ्रीक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम र नवीकरण दस्तुर गरी रू. २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी थियो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका ऋणीहरूले एनआईसी बैंकको जुनसुकै शाखाबाट किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने
छपाइ प्रकाशन तथा सञ्चार गृह मध्यम प्रभावितमा वर्गीकरण
एआईजीमा बढुवा भएका थापालाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान